महामारीको अवधिमा हामी कसरी स्वस्थ खाने छौं? - Ne gerekir?
महामारीको अवधिमा हामी कसरी स्वस्थ खाने छौं?
समाधान गरियो8.86K हेराईहरू 26 / 07 / 2021 स्वास्थ्य
लाले युक्सेल38 02 / 05 / 2021
तपाईंलाई थाहा छ, हामी गम्भीर गतिहीन छौँ र अस्वस्थ पोषणमा बदल्छौं। त्यसैले कृपया सुझाव नदिनुहोस्। वास्तवमै यसलाई कार्यान्वयन गरौं। आफूलाई विश्वस्त पार्न केहि भन्नुहोस्। रणनीति, विधि आदि किनकि हामी आफैंसँग गम्भीर मनोवैज्ञानिक लडाई लड्दैछौं।
प्रश्न नयाँ उत्तरहरूमा बन्द छ।
Ne Gerekir सबै भन्दा राम्रो उत्तर छनौट गरियो 07 / 05 / 2021
1 जवाफ दिनुहोस्
इब्राहिम Huseyin Cevik55 07/05/2021 प्रकाशित भयो
महामारी प्रक्रियाको दौरान स्वस्थ जीवन
नमस्ते सुश्री लाले, महामारी महामारी अवधिमा हाम्रो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न यहाँ प्रभावकारी तरिकाहरू छन्;
E खानुभन्दा पहिले पिउने पानी
खानु अगाडि तपाईले निश्चित रुपमा एक गिलास पानी पिउन सावधानी अपनाउनु पर्छ। एकै साथ तपाईले दिनको धेरै पानी उपभोग गर्नुपर्छ। (सामान्य व्यक्तिको लागि आवश्यक पानीको मात्रा २- liters लिटर हो।)
पानीले पाचन प्रणालीको नियमित कामको सुनिश्चित गर्दछ।
यसले भोकको भावना कम गर्छ।
यसले तनाव, तनाव र उदासीलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
यसले कोषहरूमा पोषक तत्व र अक्सिजन बोक्छ।
यसले खनिज, भिटामिन र अन्य पोषक तत्वहरूको अवशोषणलाई तीव्र गर्दछ।
यसले छालाको कक्षहरू मर्मत गरेर छालाको लोच बढाउँछ। यो छालामा उज्यालो र बढी जीवन्त देखिन्छ। यसले कपाल नरम र उज्यालो हेर्न पनि मद्दत गर्दछ।
छैन: यदि तपाईंले हाम्रो पानीलाई धेरै आवश्यकता पूरा गर्नुभयो भने, तपाईंले पानी विषाक्तताको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
Or अंशहरू सही तरिकामा कम गर्दै
हाम्रो शरीर सधैं चाहिन्छ कि हामी सामान्य भागको साथ जारी रहन सक्छौं।
उदाहरण को लागी हामी दिनहुँ breakfast स्लाइस रोटीको साथ ब्रेकफास्ट गर्छौं। यसलाई ठीकसँग कम गर्न हामीले रोटीबाट पाएको कार्बोहाइड्रेट, चिनी र प्रोटीनलाई संतुलनमा राख्नु पर्छ।
केरा: यो दुबै खान-सजिलो कार्बोहाइड्रेट र एक धेरै उपयोगी फल हो।
मसूर मसूर, जुन गुणस्तरको कार्बोहाइड्रेट मध्ये एक हो, प्रत्येक १२० ग्राममा १ 120 ग्राम प्रोटीन हुन्छ।
ओट: यसले क्यालोरी र कार्बोहाइड्रेट अनुपात प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको शरीरलाई चाहिन्छ। यसले कोलेस्ट्रोल पनि कम गर्दछ।
अण्डा: औसत १ grams ग्राम प्रोटीनको साथ हाम्रो उपज
कम फ्याट मासु: यो बी जटिल भिटामिनहरू जस्तै थाइमिन, रिबोफ्लेभिन, नियासिन, बायोटिन, बी,, बी १२, पेन्टोथेनिक एसिड, फोलाकिन जस्ता महत्वपूर्ण स्रोतहरू हुन्। यो फलाम, जिंक, मैंगनीजका लागि पनि उत्कृष्ट भोजन हो।
दही: यो यस्तो खाना हो जसले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, खनिज र भिटामिन जस्ता धेरै पोषकहरू समावेश गर्दछ।
यस प्रकारको खानाको साथ, हामी आफैंलाई प्राकृतिक विकल्पहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
Erc‍♀️ व्यायाम गर्दै
यहाँ मैले तपाईंलाई सम्झाउनु पर्छ कि; "स्वस्थ टाउको ठोस शरीरमा हुनेछ।"
१ घण्टाको दैनिक हिंडाइले तपाईंलाई जोडदार र स्वस्थ राख्दछ। (हामी तपाईंलाई कर्फ्यू बाहिरका घण्टा पालन गर्न चाहन्छौं।)
हामीले भनेको छैन कि तपाई निश्चित रूपमा बाहिर हिंड्नु पर्छ। तपाईं योग, व्यायाम, र ध्यान जस्ता गतिविधिहरू अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई घरमा राम्रो महसुस गराउँदछ।
➡ तपाईं हाम्रा सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आफैलाई मनाउन सक्ने विधिहरू पनि सुन्न चाहनुहुन्छ। त्यसोभए हामीले के लेख्यौं तपाईंको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर थियो। हामी निकट भविष्यमा तपाईलाई विस्तृत लेख सहित फर्किनेछौं! 😊
Ne Gerekir सम्पादन गरिएको टिप्पणी 09 / 08 / 2021
लाले युक्सेल मा टिप्पणी गरियो 08 / 05 / 2021
धन्यवाद İब्राहिम बे 😊
प्रयोगकर्तानाम वा इ-मेल ठेगाना
प्रश्न तथ्या .्क
सक्रिय 26 / 07 / 2021
श्रेणी भन्दा बाहिर
अन्तिम उत्तर प्रश्नहरू
द्रुत प्रतिक्रिया सेक्सन